Android တွင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို PDF သို့ ပြောင်းနည်း Androidsis
Android တွင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို PDF သို့ ပြောင်းနည်း
Eder Ferreno | 22/11/2021 14:00 | Android cheat
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား များစွာသော လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သော စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့မှ အများဆုံးရနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖိုင်များကို formats အမျိုးမျိုးကြားပြောင်းပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို PDF သို့ JPG သို့မဟုတ် PNG ဓာတ်ပုံအဖြစ်သို့ ပြောင်းနိုင်သည်။ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုလုံးသည် Android ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်တွင် အနည်းငယ် ဖြစ်နိုင်သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အချို့သောအခါသမယတွင် Android တွင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို PDF သို့ ပြောင်းရန် လိုအပ်သည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းတွင်ရှိသောထိုဓာတ်ပုံကို PDF ဖော်မတ်သို့လွှဲပြောင်းလိုပါကပြသထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းလမ်းများစွာကို အသုံးချနိုင်သည်၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် အသုံးပြုရအလွန်အဆင်ပြေသည်၊ ထို့ကြောင့် သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာနှင့် ကိုက်ညီသည့်အရာတစ်ခု ရှိနေသည်မှာ သေချာပါသည်။
2 သင့် Android မိုဘိုင်းရှိ ပြခန်း
3 ဓာတ်ပုံကို PDF သို့ပြောင်းရန်အပလီကေးရှင်းများ
3.1 PDF Converter သို့ပုံ
3.2 Microsoft က Office ကို
4 Image ကို PDF သို့ပြောင်းရန်
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုဘိုင်းတွင် မည်သည့်အရာကိုမျှ ထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသည့် အလွန်အဆင်ပြေသော ရွေးချယ်မှုမှာ ဝဘ်စာမျက်နှာကို အသုံးပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုဓာတ်ပုံကို PDF ဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းပါ။. ၎င်းကိုဖြစ်မြောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည့် ဝဘ်စာမျက်နှာများစွာရှိပါသည်၊ အချို့သောအမည်များကို သင်သိပြီးသားဖြစ်ပေမည်။ ၎င်းသည် အလွန်လျင်မြန်ပြီး ဖုန်းပေါ်ရှိ browser တွင် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်အရာကိုမျှ ထည့်သွင်းစရာမလိုတော့ပါ။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ လှည့်ကြည့်နိုင်သော ဝဘ်စာမျက်နှာ အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။. Format PDF ကဲ့သို့သော အမည်များကို အသုံးပြုသူများစွာ သိရှိကြပြီးဖြစ်သော်လည်း ကဲ့သို့သော ရွေးချယ်မှုများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင် Smallpdf. Android တွင် ဓာတ်ပုံကို PDF အဖြစ်သို့ ပြောင်းရန် ဤဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နာရမည့် အဆင့်များမှာ-
သင်၏ Android ဖုန်းပေါ်ရှိဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ပါ။
SmallPDF (သို့မဟုတ် ထိုဖိုင်များကို ပြောင်းရန် သင်ရွေးချယ်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်) ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
JPG သို့ PDF သို့ပြောင်းရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ရွေးချယ်ပါ (ဓာတ်ပုံသည် PNG ဖြစ်ပါက၊ ထို့နောက် PNG မှ PDF သို့ ပြောင်းရန် ရွေးချယ်ပါ)။
သင်ပြောင်းလဲလိုသော ဓာတ်ပုံကို အပ်လုဒ်လုပ်ပါ။
ဝဘ်ပေါ်တွင် အပ်လုဒ်တင်ရန် စောင့်ပါ။
Create PDF ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
သင့်ဖုန်းတွင် PDF ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
အဲဒီ PDF လေးရပြီဆိုရင်၊ အဲဒါနဲ့ သင်လုပ်ချင်တာကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။. ၎င်းကို အီးမေးလ် သို့မဟုတ် အခြားအက်ပ်များဖြင့် ပေးပို့နိုင်သည့်အပြင် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုပေါ်တွင် အပ်လုဒ်တင်နိုင်ခြင်း၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် သင်မြင်သည့်အတိုင်း အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်တိုင်းအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိရန် လိုအပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့တင်လိုက်သောဓာတ်ပုံသည် အနည်းငယ်လေးလံနေပါက အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီး မိုဘိုင်းဒေတာကို ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်သော်လည်း အချိန်အနည်းငယ်ကြာသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် WiFi ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် တော်တော်များများအတွက် ပိုကောင်းနိုင်သည်။
သင့် Android မိုဘိုင်းရှိ ပြခန်း
ဤဒုတိယနည်းလမ်းသည် Android အသုံးပြုသူတိုင်း အသုံးမပြုနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်မိုဘိုင်း၏ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအလွှာပေါ်တွင်မူတည်သော်လည်း ၎င်းတို့ထဲမှအချို့ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို PDF သို့ပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုပေးသည်။, ဥပမာအားဖြင့်။ ထို့ကြောင့် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန် သင်သည် ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်တွင် အပလီကေးရှင်းများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် တစ်ကြိမ်လျှင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းသာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း အများအားဖြင့် အဆင်ပြေသည့်အရာဖြစ်သောကြောင့် သင့်တွင် ဓာတ်ပုံများစွာရှိလျှင် ၎င်းသည် လေးလံပြီး ကြာလွန်းသည့်အရာဖြစ်သည်။
သင်လုပ်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးအရာမှာ ဤရွေးချယ်မှုကို သင့် Android ဖုန်းတွင် ရနိုင်မလား။ သို့ဆိုလျှင်၊ သင်သည် ထိုဓာတ်ပုံများကို PDF ဖော်မက်ဖြင့် ဖိုင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ပြင်ပအက်ပ်ပလီကေးရှင်းများကို အားကိုးစရာမလိုသောကြောင့် အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အရာဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် သင်လိုက်နာရမည့် အဆင့်များမှာ-
သင့် Android ဖုန်းတွင် ပြခန်းအက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ။
PDF သို့ပြောင်းလိုသော ဓာတ်ပုံကို ရှာပါ။
မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဆက်စပ်မီနူးတစ်ခုကို ဖွင့်ပေးမည့် ထိုဓာတ်ပုံပေါ်ရှိ ဒေါင်လိုက်အစက်သုံးစက်၏ အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။
Import as PDF option ကို ရွေးပါ (သို့မဟုတ် အလားတူ၊ အမည်သည် သင့်ဖုန်း၏ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှု အလွှာပေါ်တွင် မူတည်ပါမည်)။
စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် သင့်တွင် သင်ရွေးချယ်ထားသော တည်နေရာတွင် သင့် Android ဖုန်းတွင် သိမ်းဆည်းမည့် PDF တစ်ခုကို ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သင်သည် ဤဖိုင်ကို PDF ဖော်မတ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သုံးစွဲသူများစွာအတွက် ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ရန် အနည်းငယ်လွယ်ကူသည်။
ဓာတ်ပုံကို PDF သို့ပြောင်းရန်အပလီကေးရှင်းများ
တတိယရွေးချယ်မှုမှာ အချို့ကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ထိုဓာတ်ပုံကို PDF အဖြစ်ပြောင်းရန် Android အက်ပ်. Play Store တွင် ဖိုင်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မိုဘိုင်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖိုင်များကို ဖော်မတ်အမျိုးမျိုးသို့ ပြောင်းနိုင်စေမည့် ရရှိနိုင်သည့်အက်ပ်ကောင်းများ ရွေးချယ်မှုရှိပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သွားမည့်အရာ သို့မဟုတ် တစ်ချိန်တည်းတွင် ဖိုင်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက်ပြောင်းရလျှင် ၎င်းသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဒါကိုလုပ်ဖို့ Android မှာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရတဲ့ Application နှစ်ခုအကြောင်း ပြောပြပါမယ်။ ၎င်းတို့သည် သင် အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည့် အက်ပ်များဖြစ်ပြီး သင်အလိုရှိတိုင်း သင့်ဖုန်းပေါ်တွင် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤအရာများသည် Android အတွက်ရရှိနိုင်သော အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည်။
PDF Converter သို့ပုံ
ဤပထမအက်ပ်သည် လူသိအများဆုံးနှင့် တစ်ခုဖြစ်သည်။ Android တွင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို PDF သို့ ပြောင်းရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။. ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြခန်းမှ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ သို့မဟုတ် ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံကို အသုံးပြုထားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်စေသောကြောင့် အဆိုပါပုံသည် အလိုရှိသော PDF ဖိုင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မတူညီသောကိစ္စများတွင် အသုံးချနိုင်ပြီး မတူညီသောအသုံးပြုသူများ၏ အမျိုးအစားများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသောကြောင့် ၎င်းသည် အသုံးပြုရန်ကောင်းမွန်သောအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အပလီကေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုရှိသည်။ထို့ကြောင့် မည်သည့် Android အသုံးပြုသူမဆို ပြဿနာမရှိဘဲ ၎င်းကို သုံးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်တွင်ဖွင့်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရွေးချယ်ရန်သာ လိုအပ်ပြီး ဓာတ်ပုံ (ပြခန်း သို့မဟုတ် ကင်မရာမှ) ကိုရွေးချယ်ပြီး ၎င်းကို အလိုရှိသော PDF ဖိုင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက် စောင့်ပါ။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓာတ်ပုံမှ ဖန်တီးထားသည့် PDF ကို နာမည်ပေး၍ ထိုဖိုင်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အလိုရှိသည်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည် (ဥပမာ၊ ၎င်းကို စာတိုက်ဖြင့် ပေးပို့ခြင်း)။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပြီးမြောက်သည်။
Image to PDF Converter သည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ Android မှာအခမဲ့ download လုပ်ပါPlay Store တွင် ရနိုင်ပါသည်။ အပလီကေးရှင်းအတွင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသည့် ကြော်ငြာများပါရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို ဖုန်းတွင် ပြဿနာမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ရေးသားသူ: အဲဒါ LAB
Android အသုံးပြုသူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ဖုန်းများ သို့မဟုတ် တက်ဘလက်များတွင် ရှိနေသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ Microsoft က Office ကိုအချို့သောဖုန်းများတွင် ၎င်းကို မူရင်းအတိုင်းပင် ထည့်သွင်းထားသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်က ဤအက်ပ်သည် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များစွာကို မိတ်ဆက်နိုင်စေသည့် အဓိက ဒီဇိုင်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် အင်္ဂါရပ်အသစ်များထဲမှတစ်ခုမှာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို PDF အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည့် စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ Android စက်များတွင် ထည့်သွင်းထားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် ၎င်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည့်အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Android ပေါ်တွင် Microsoft Office ရှိသည့် မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို ပြုလုပ်နိုင်သော အရာဖြစ်သည်။ လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့် သင့်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်တွင် အပလီကေးရှင်းရှိပါက၊ ဤအပလီကေးရှင်းရှိ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို PDF အဖြစ်သို့ ပြောင်းရန် အဆင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သင့်ဖုန်းတွင် Microsoft Office ကိုဖွင့်ပါ။
ဓာတ်ပုံရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် အပ်လုဒ်တင်ရန် သို့မဟုတ် ထိုအချိန်တွင် မိုဘိုင်းကင်မရာဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် ဓာတ်ပုံကို ရွေးချယ်ပါ။
စခရင်၏အောက်ခြေတွင်ရှိသော File type ဟူသောခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
PDF ကိုရွေးချယ်ပါ (ဖိုင်အမျိုးအစားပြောင်းသွားသောအခါတွင် ၎င်းသည် သင့်အား စခရင်ပေါ်တွင်ပြသပါမည်)။
ဓာတ်ပုံကို PDF အဖြစ်ပြောင်းပြီးဖြစ်သည်။
ထို PDF ကို သင့်ဖုန်းတွင် သိမ်းဆည်းပါ။
Microsoft Office: Word၊ Excel၊ PowerPoint နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်
Image ကို PDF သို့ပြောင်းရန်
ဤစာရင်းရှိ တတိယအက်ပ်သည် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို PDF အဖြစ်သို့ ပြောင်းရာတွင် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့်အက်ပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Android သုံးစွဲသူများကြားတွင် ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအပလီကေးရှင်းသည် သင့်အား မည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုမဆို PDF အဖြစ်သို့ ပြောင်းနိုင်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ JPG၊ PNG သို့မဟုတ် TIFF ကဲ့သို့သော ဖော်မတ်များအတွက် ပံ့ပိုးမှု၊ ဥပမာအားဖြင့်။ ၎င်းသည် လည်ပတ်မှုစနစ်ရှိ အသုံးပြုသူတိုင်းသည် အဆိုပါဓာတ်ပုံများကို ပြောင်းလဲရန် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်မည်ကို ဆိုလိုပါသည်။
ထို့အပြင်ဤလျှောက်လွှာတွင်ရှိသည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော interface တစ်ခုဖြစ်သည်။. အက်ပ်တွင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်း၊ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသော PDF ဖိုင်သို့ ပြောင်းပေးမည့် အက်ပ်သည် စက္ကန့်အနည်းငယ်သာ ကြာမည်မှာ အမှန်တကယ်ရိုးရှင်းပါသည်။ အပလီကေးရှင်းသည် ၎င်းတို့၏အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့သော ဖိုင်များဖြင့် အချိန်တိုင်းပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် ကူညီပေးသည့် ဖိုင်များနှင့်အတူ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ဤလျှောက်လွှာကိုတတ်နိုင်သမျှ Android တွင် အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။Google Play Store တွင် ရနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကြော်ငြာများပါရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ဖုန်းတွင်အသုံးပြုသည့်အခါတွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ဤအက်ပ်ကို ဤလင့်ခ်မှ သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ပုံကို PDF သို့ပြောင်းပါ - ဓာတ်ပုံကို PDF သို့ PDF ပြောင်းပါ။
ရေးသားသူ: ရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်း, Ltd.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android cheat » Android တွင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို PDF သို့ ပြောင်းနည်း
Worder: Appalabrados မှာအနိုင်ရဖို့ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
နည်းပညာအတွက် Black Friday